Soomaaliya oo sheegtay in aysan marna gorgortan ka geli doonin muranka badda kala dhaxeeya Kenya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSoomaaliya oo sheegtay in aysan marna gorgortan ka geli doonin muranka badda kala dhaxeeya Kenya
September 4, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Wasiir dowlaha arrimaha dibada Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Khayr. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan marna gorgortan ka geli doonin muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya.
Wasiir dowlaha arrimaha dibada Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Khayr oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in marnaba gorgortan iyo hadal aysan ka geli doonin muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya.
“Marnaba gorgortan iyo hadal kama taagna, mowqifka dowladda Soomaaliya waxa weeye in kiiska uu maxkamada ka socdo.” Ayuu yiri wasiir dowluhu.
Dhageysiga ugu dambeeya ee kiiska muranka badda labada dal oo yaalay maxkamada caalamiga ah ee ICJ shanti sanno ee u dambeysay ayaa qorshuhu yahay in uu dhaco asbuuca soo socda.
Wargeyska fadhigiisu yahay Kenya ee Daily Nation ayaa ku waramay in Kenya ay codsi u dirtay maxkamada ICJ in dib loo dhigo dhageysiga kiiska si ay u qorato koox cusub oo difaacda.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Puntland ee ku sugan magaalo xeebeedka Qandala ayaa soo bandhigay hub ay ka qabsadeen dagaalyahanada ISIS. Sida ay ciidamadu sheegeen, in ka badan 200 rasaas ah, 2 qori oo RBJ ah, [...]